Ikhaya > iimveliso > DataNumen Outlook Repair > Kutheni iifayile ze-PST ze-Outlook zihlala ziRhwaphilizo?
Umboniso yi-most esetyenziswa ngokubanzi kumxhasi we-imeyile kwihlabathi leWindows. Nangona kunjalo, iifayile zedatha ye-Outlook PST nazo ziqhelekile kurhwaphilizo. Ngoba? Apha ngezantsi siza kuhlalutya izizathu kunye nezisombululo ezihambelanayo.
1. UMicrosoft akaboneleli ngendlela efanelekileyo yokuthintela urhwaphilizo lwefayile yePST
Eyokuqala kunye most Kubalulekile ukuba iMicrosoft ayiboneleli ngendlela efanelekileyo yokuthintela urhwaphilizo, ngolu hlobo lulandelayo:
Ifomathi yefayile ye-PST ngokwayo ayinayo inqaku lokulwa urhwaphilizo, elinjengerekhodi yokufumana kwakhona njenge-WinRAR .RAR ifomathi yogcino okanye iphepha lomjelo njenge SQL Server Isiseko sedatha seMDF. Ngerekhodi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo okanye iphepha elinemisinga, xa inxenye yedatha yonakele, kulula ukuyifumana kwaye unciphise amathuba okulahleka kwedatha nge-90%.
Ifayile ye-PST kulula ukuba yonakaliswe xa ubungakanani befayile busonyuka, kwaye akukho ndlela yakukhusela le nto ngokuzenzekelayo. I-Outlook ayizukusebenzisa iifayile ezininzi ukugcina idatha ngokuzenzekelayo xa ubungakanani befayile bukhulu. Umsebenzisi kufuneka ayenze ngesandla. Ewe kunjalo, most Abasebenzisi abayi kuqaphela oku. Inxalenye kuphela enxulumene ne-Outlook inyanzela umsebenzisi ukuba agcine ii-imeyile ezindala, kodwa eli nqaku alihoyi ubungakanani befayile.
Kwi-Outlook, akukho phawu lokugcina ngokuzenzekelayo ifayile yePST. Ukuba i-Outlook ibinento enjalo, ukuba ifayile ye-PST yonakele, nokuba ayinakufunyanwa, umntu unokuyibuyisela kuhlobo lwakudala lokugcina, oluza kuba nemithaost Idatha yokuhlaziya ukuba ugcino lwenziwa veki nganye.
IMicrosoft inikezela ngesixhobo sasimahla sokubuyisa ifayile ye-PST ebizwa ngokuba iskenpst, ihamba ne-Outlook. Nangona kunjalo, inokulungisa kuphela ifayile ye-PST ngokonakala okuncinci. Ukuba umonakalo okanye urhwaphilizo lukhulu, i-scanpst iya kusilela kumost yamatyala.
2. Abantu abaninzi bayisebenzisa gwenxa ifayile yePST:
I-Outlook ithandwa kakhulu kangangokuba baninzi kakhulu abantu abayisebenzisa yonke imihla. Kwaye uninzi lusebenzisa gwenxa ifayile ye-PST eyenza ukuba ithambekele kurhwaphilizo:
Kule mihla ngenxa yokunyuka kwee-imeyile kunye nenye idatha yobuqu, ubungakanani befayile ye-PST inyuka kakhulu. Ukusuka kwi-GBs ezininzi kwiintsuku zokuqala, ukuya ngaphezulu kwe-20GB okanye i-50GB. Ezinkulu yile fayile ye-PST, kokukhona kuya lula ukonakala. Inkqubo elungileyo yokulawula idatha enkulu ukwahlulahlula kwiifayile ezincinci ze-PST, umzekelo, gcina ii-imeyile ezindala kwiifayile zePST ezigciniweyo, ukuqinisekisa ubungakanani befayile nganye ye-PST <= 10GB, endaweni yokusebenzisa ifayile yePST enkulu kakhulu.
Umntu othile uya kuyicima ikhompyuter xa ifayile ye-PST isavulwe yi-Outlook, eya kuthi ibangele urhwaphilizo.
Umntu othile uya kugcina iifayile ezinkulu ze-PST kwi-network drive, engacetyiswayo kuba ifayile yePST ngokwayo ayenzelwanga le nto. Kwaye kulula ukubangela urhwaphilizo xa ungena kwifayile ye-PST ngenethiwekhi.
Ulwazi oluthe kratya malunga neendlela ezilungileyo zokuthintela urhwaphilizo lwefayile ye-PST inokufumaneka ku https://www.datanumen.com/prevent-pst-corruption/
Ungazilungisa njani iifayile ze-PST ezonakeleyo:
Ukuba urhwaphilizo lwefayile ye-PST lwenzeka, kuqala ungazama simahla iskenpst, kuba sisixhobo esisemthethweni esinikezwe yiMicrosoft ukulungisa iifayile ze-PST ezonakalisiweyo, kwaye simahla. Ukuba ayisebenzi, ungazama DataNumen Outlook Repair.